■ Ukusetyenziswa kwaManzi eZero
■ Ulondolozo oluncinci.
■ Akukho dosi yemichiza ifunwayo.
■ Akukho Scaling / Limescale idipozithi kwiiFins / Tube.
•Izinto zoKwakha: Iityhubhu zeCopper kunye neeAluminiyam.
•Enye yezona zinto zibalaseleyo kwiicooler cooler zethu kukomelela kwaso. Ukucinga okucwangcisiweyo ikakhulu kwizicelo zeshishini, kufuneka baqinisekise ukusebenza ngokukuko kunye nokumelana nexesha lokusebenza kunye neemeko zokusebenza ezigwenxa.
•Onke amacandelo asebenza njengenkxaso okanye isakhelo kwikhoyili, kunye nenkxaso yesakhiwo sabalandeli sakhiwe ngeepaneli okanye iiprofayili zentsimbi ebunjiweyo enobunzima be-2 okanye ye-3 mm.
•Imilenze okanye iinyawo ze-ankile iphelele nazo zakhiwe ngeeprofayili zephepha ezilicwecwe ezi-4 mm.
PUmgaqo wokuSebenza: Isipholisi soMoya sisebenzisa i-Ambient Air ukupholisa inkqubo ye-fluid ngaphakathi kwekhoyili. Umbane oshushu uphulukana nobushushu bevide ityhubhu yoBhedu kunye nemiphetho ebonelelweyo yokwandisa iNdawo yokuDlulisa uBushushu.
Amafeni akhuthaza okanye anyanzela, umoya oMbiyo ngaphezulu kwesixokelelwano seFinned Coil, esithwala ubushushu obuvela kulwelo luye luchithakale emoyeni.
Kwimeko yabalandeli abayilwayo oyilekileyo ityhubhu ebekwe ezantsi kwe fan. Ifeni ikhusela ityhubhu egqityiweyo ukunciphisa ifuthe lokukhanya kwelanga, umoya, isanti, imvula, ikhephu kunye nesichotho, ukuze isixhobo esenziwe ngumoya sisebenze ngokuzinza kobushushu; kwangaxeshanye, inokusasaza ngokulinganayo umoya ngengxolo ephantsi.
Kwimeko yokunyanzelwa kwabalandeli abalandeli ityhubhu ibekwe ngaphezulu kweefeni. Kufanelekile ukuba isicelo inkqubo lobushushu eliphezulu, kulula ukuba ukucoca kunye nokulungisa, ulondolozo ngaphantsi ukusetyenziswa kwamandla eliphantsi.
Ukupholisa umoya usebenzisa umoya njengesixhobo sokupholisa ayisiyonyani kuphela yotyalo-mali olusezantsi kunye neendleko zokusebenza eziphantsi, kodwa nokukhetha ukonga izibonelelo zamanzi ezinqongopheleyo, ukunciphisa ukukhutshwa kogutyulo loshishino kunye nokukhusela imeko yendalo.
•I-LNG •Intsimbi kunye nentsimbi
Egqithileyo Uhlobo oluvulekileyo lwensimbi yokupholisa iNqaba-ukuPhuma koMnqamlezo
Okulandelayo: Indawo epholileyo
Eyona ndawo ipholileyo yomoya opholileyo
Ukuphola kweBonaire evaporative
Indleko yomoya opholileyo
Ukupholisa umoya opholileyo
Ukuphola komoya opholileyo